Home » Bixinta » Xirfadaha Tababarka Tababarka Tababarka ee Xirfadaha Nolol Xaqsi Leh 8 / 31 / 16
2016 Xilliga Xagaaga
Gali Fursad si aad u guuleysid Balloon Tababarka Dhabarka Tababarka
Mashruucaan wuxuu bilaabmayaa 7 / 19 / 16 & Dhamaysta 8 / 31 / 16 11: 59 PM PM
Ku saabsan kubbada Tababarka Nolosha Noolaha:
Kubadda tababarka jirka ee BodyFit waa mid ku habboon in lagu daboolo muruqyadaada caloosha. Waxay bartilmaameedsaneysaa muruqyada caloosha iyo dhabarka hoose, adigoo ku siinaya xoog iyo dabacsanaan si aad u riixdo inta lagu jiro ... tababarka. Kubadahan dabacsan ee raaxada leh waa bakeeriga oo waa la isku-hagaajin karaa si loogu dhigo xasiloonida aad u baahan tahay. Cabbirka: XAMKA XIDHIIDHA. Midabka: BULSHADA. Qalabyada PVC Qalab fudud oo la adkeyn karo Heerka xasiloonida ee kala duwan Waxaa ka mid ah laba bareeso insert
The FitnessRebates.com Tababar Tababarka Carruurta Tababar Tababarka ah ("Sweepstakes") wuxuu u furan yahay dadka sharciga ah ee kontonka (50) ee Mareykanka iyo Degmada Columbia da 'da' 18 oo leh marin u adeegsata internetka mar kasta inta lagu jiro hoolalka iyo xilliga abaalmarinta abaal-marinta kadib haddii aysan ku qorneyn FitnessRebates.com. Dadka aan deganayn Maraykanka oo da'doodu ka weyn tahay 18 ayaa geli kara haddii aan si cad loo mamnuucin sharciyada deegaanka iyo sharciga. Dhammaan shaqaalaha FitnessRebates.com. ("Sponsor"), dhammaan hay'adaha la xariira iyo mid kasta oo ka mid ah wakiillada iibka, kuwa loo qaybiyo, ama wakiilada (dhammaan kuwa kor ku xusan, oo ay weheliyaan Sponsor, wadajir ahaan loo yaqaan "Sweepstakes Entities"), iyo xubnahooda qoyska ugu dhow (lamaanaha, ilmaha, walaalaha iyo lamaanaha ay wadaagaan) iyo kuwa ku wada nool hal qoys oo kasta (haduu la xidhiidho ama aan la xiriirin), uma qalmaan inay ka qayb qaataan Sweepstakes. Dhamaan shuruucda federaalka, dawlad-goboleedka iyo degaanka iyo xeerarka waa la dabaqayaa Xidibaad sharci ah oo mamnuuc ah ama xadiday. Gelitaanka Sweepstakes waxay ka dhigan tahay aqbalaadda buuxda ee aan sharciga waafaqsaneyn ee sharciyadan rasmiga ah. MASUULIYAD LACAGEED GOOBAHA SHAQAALAHA LAGU HELAYSAA DHIBAATOOYINKA CAAFIMAADKA